Somaliland: Madaxtooyada Oo Ka Jawaabtay Hadal Ka Soo Yeedhay Dawladda Somaliya - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Madaxtooyada Oo Ka Jawaabtay Hadal Ka Soo Yeedhay Dawladda Somaliya
Madaxtooyada Somaliland ayaa ka jawaabtay hadal ka soo yeedhay dawladda Somaliya, waxaana warsaxaafadeed soo saaray afhayeenka madaxtooyada Xuseen Aadan Cige (Deyr), kaas oo u dhignaa sidan “Qarannimada iyo Dawladnimada Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka dhalatay iraadada iyo rabitaanka shacbigeeda, jiritaankeeduna waa muqadas aanay ciddina waxba ka bedali karin. Jamhuuriyadda Somaliland waa qaran madax banaan waxana ka jira Nabadgelyo, Xasilooni, Dawladnimo iyo Dimuqraadiyad xidido adag leh oo shaqeynaysay muddo rubuc Qarni ah.
Xil-kasnimo darro iyo caqli-gurracan waa arrimo dhamaantoodba ka soo unkuma kuna aroora Xukuumadihii talada Xamar u kala dambeeyey. Caddaalad darro iyogardiidnimo waa xudunta wixii Soomaali kala irdheeyey ee aramida iyo utunta dhex dhigay colaadaha sokeeyena u horseeday. Dawladda Jam. Somaliland waxay u aragtaa in maslaxadda iyo danta ummadda isirka Somaaliga ah ee ku dhaqan geeska Africa, ay ku jirto inay ku wada noolaadaan nabad, is-tixgelin iyo deris wanaag.
Guntii iyo gaba-gabadii, Jiritaanka Qarannimada iyo Madax-bannaanida Jam. Somaliland maaha mid ku dhisanDhalanteed iyo Laxow Been ah, balse waa dareen dhab ah iyo rabitaan qoto dheer oo ku abuuran qof kasta oo muwaadin reer Somaliland ah. Xuquuqda aasaasiga ah iyo Xuduudaha Jamhuuriyada Somaliland waa lama taabtaan. Sidoo kale, cidina kuma xad gudbi karto xaqa aayo-ka tashiga dadkayga iyo xurmada madax bannaanida dalkayga.
Dawladda iyo shacbiga JSL u dulqaadan maayaan farogelinta ay Xukuumadda Muqdisho ku hayso ciiddayada, calankayaga iyo qarannimadayada. Waxanu diyaar u nahay in aanu naf iyo maalba u hurno difaaca dhulkayaga hooyo iyo jiritaanka qarannimadayada.”